TRENDING : #मुसिकोट
अर्लाङकोटका दृष्टिविहिन खरेललाई गुल्मी सेवा समाज बेलायतको सहयोग !
सागर भण्डारी, गुल्मी । मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ९ अर्लाङ्कोटका दृष्टिविहिन बाबुराम खराललाई गुल्मी सेवा समाज बेलायतले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
जन्मजातै दृष्टिविहिन रहेका खरालको जीवनयापन सहज होस् भनेर १० औँ अन्तरराष्ट्रिय अपागं दिवसको अवसर पारेर समाजले बेलायतमा रहेका नेपालीहरुसगंबाट सहयोग सकंलन गरेको थियो ।
मुकुन्द खरेलको सयोंजनमा सकंलित नगद १ लाख रुपैयाँ बाबुरामको घरमै पुगेर हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यस्तै सहयोग रकम सकंलनमा समाजका अध्यक्ष टोप पल्ली र सचिव विर बरालले पनि महत्वपूणर् भूमिका खेल्नुभएको थियो । उक्त सहयोग रकम मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले दृष्टिविहिन खरेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख सापकोटाले विदेशमा रहेर पनि स्वेदश प्रतिको माया र सहयोग प्रशंसनीय रहेको भन्दै सहयोगी संस्था गुल्मी सेवा समाज बेलायतलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । सहयोग रकम सदुपयोग गरेर कुनै सीपमूलक कार्यमा लगाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै सापकोटाले अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यको सहयोगले मात्रै नपुगेको भन्दै यी र यस्तै संस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अपागंता भएकाहरुको जीवनस्तर सहज बनाउन परिवार र समाजको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूणर् हुने उहाँको भनाई थियो । सहयोग रकम ग्रहण गर्दै खरेलले सहयोगी संस्था प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ८ का वडाध्यक्ष नारायण सापकोटा, वडा नं ९ का वडाध्यक्ष नरेशराज खरेल, उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपालबाट समन्वय गर्नुभएका कमलराज खरेल स्थानीय पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
विपत र गुल्मीबासीको पीडामा अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्दै आएको गुल्मी सेवा समाज बेलायतले यस अगाडी पनि थुप्रै व्यक्तिलाई सहयोग गरिसकेको छ । समाजले अहिलेसम्म ४ वटा एम्बुलेन्स निशुल्क रुपमा प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै आशा अपागं केन्द्र तम्घासलाई ५ लाख बराबरको सामान, कोरोना महामारीको समयमा गुल्मीका १२ वटै स्थानीय तहमा माक्स सेनिटाईजर लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामाग्री पनि समाजले वितरण गरेको थिो । त्यस्तै जिल्लामा हुने विभिन्न दैविप्रकोपका घटनाका पीडित र आर्थिक अभावमा रहेका परिवारलाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
महान् जनयुद्धको तयारी, सुरुवात र विकास !
'प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वस्त पारौं ! महान जनयुद्ध बाटोमा अघि बढौं ! भन्ने नाराका साथ २०५२
धुर्कोट गाउँपालिकाले दियो (भोलि) मंगलबार सार्वजनिक विदा !
ऐतिहासिक धुर्कोट कोटमा असोज शुक्ल पुर्णिमाको दिन सराय नाच देखाउने प्रचलन रहि आएको छ ।
गुल्मीमा छोराद्वारा बाबुमाथि खुकुरी प्रहार !
खुकुरी प्रहारपछि फरार भएका राजेन्द्र घर्तीमगरलाई प्रहरीले खोजि गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गुल्मीले पायो पुर्णता
जसको उपाध्यक्षमा चन्द्र सुनार र झवि पाण्डेय रहेका छन् ।
झाँक्रीले भनिन् एमालेमा ओली समर्थक नेता चाकार ,तेस्रो धारका नेता दासी (भिडियो सहित)
एमालेमा दश भाई भनेर चिनिने तेस्रो धारका नेताहरु दासी भएको आरोप लगाएकी छन् ।
गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीलाई पोषण सम्बन्धी प्रशिक्षण
अहिले ४० जना स्वास्थ्यकर्मीले तालीम लिईरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।